Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Fantsom-panafody mpandeha Rowdy Frontier Airlines napetraka amin'ny seza
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Namoaka fanambarana ny Frontier Airlines, milaza fa nokapohin'ilay lehilahy ny mpiambina fiaramanidina lahy iray ary notsatohany mpiambina vehivavy roa.
Nanomboka nahery setra ny mpandeha ary nanafika ilay lehilahy mpikarakara ny sidina.
Ny mpandeha tsy voafehy dia nikiakiaka momba ny ray aman-dreniny nanan-karena ary manana $ 2 tapitrisa.
Nampiato ny ekipa ny Frontier noho ny fantsom-panafody nampikatso ny mpandeha teny amin'ny toerany rehefa tonga tany Miami izy ireo.
Ny Frontier Airlines dia nanangana fanadihadiana momba ny trangam-piaramanidina iray ary mpandeha tsy voafehy no resin'ny ekipa.
Ny horonan-tsarin'ny mpandeha tsy voafehy iray nopetahana tamina fantsom-pahatongavana teo amin'ny sezany teo afovoan'ny sidina taorian'ny voalaza fa totohondry sy mpihetsiketsika mpiasan'ny sidina no nalaza be tao amin'ny media sosialy, ary izany no nahatonga ny zotram-panadihadiana hanao fanadihadiana.
Nampihetsi-po ny talata teo ny horonantsary rehefa niditra tamin'ny media sosialy izy. Ao amin'ny clip, ny mpikarakara ny sidina iray dia azo jerena manaparitaka mpandeha ho any amin'ny sezany, na dia mametraka ny kasety eo am-bavany aza, ary ny hafa kosa ao amin'ny fiaramanidina mihoby.
Frontier Airlines namoaka fanambarana momba an'io tranga io, milaza fa nokapohan-dehilahy ny mpiasan'ny fiaramanidina lahy iray ary notsatohany mpiambina vehivavy roa.
“Nandritra ny sidina iray avy tany Filadelfia nankany Miami ny 31 Jolay, mpandeha iray no nifandray tamina mpiasan'ny sidina tsy mendrika ary avy eo nanafika mpiasan'ny sidina iray hafa, ”hoy ny zotram-piaramanidina. “Vokatr'izany dia nila nofehezina ny mpandeha mandra-pahatongan'ny sidina tany Miami ary tonga ny fampiharana ny lalàna.”
Ilay mpandeha, Maxwell Berry, dia nosamborin'ny polisy tao Miami ary miatrika bateria miisa telo.
Berry, 22 taona, dia voalaza fa nanosotra kapoaka teo an-damosin'ny mpikarakara ny sidina ary avy eo nipoitra avy tsy nisy lobaka tao amin'ny fandroana, nitaky ny mpiasa hahita azy akanjo vaovao ao anaty valizy. Avy eo i Berry dia nihady tamina tratra vehivavy mpanotrona roa ary nanisy totohondry ny tarehin-dry zareo mpanamory fiaramanidina iray, hoy ny polisy.
Ny horonantsary dia niparitaka haingana sy be dia be tao amin'ny media sosialy, ary vitsy no naneho fangorahana an'ilay mpandeha tery.
Ao amin'ny horonan-tsary iray hafa voalaza fa misy an'i Berry, mikiakiaka momba ny ray aman-dreniny manankarena izy ary manana $ 2 tapitrisa.
Na eo aza ny fanohanan'ny besinimaro ireo mpikarakara ny sidina dia nampiato azy ireo ny adiresy manidina mandra-panatontosa fanadihadiana feno.
"Ireo mpikarakara ny sidina dia, araka ny takiana amin'ny toe-javatra toy izany, dia ho afaka amin'ny sidina mandra-pahavitan'ny famotopotorana ny zava-nitranga," hoy ny kaompaniam-pitaterana.